विनोद चौधरीको ‘मोडल नवलपुर’ सार्वजनिक, कान्छो जिल्लालाई नमुना बनाउने उद्घोष ! « GDP Nepal
विनोद चौधरीको ‘मोडल नवलपुर’ सार्वजनिक, कान्छो जिल्लालाई नमुना बनाउने उद्घोष !
Published On : 16 November, 2018 10:42 pm
नवलपरासी । उद्योगपति विनोद चौधरीले नेपालको सबैभन्दा कान्छो जिल्ला नवलपुरलाई नमुना जिल्लाका रुपमा विकास गर्न अग्रसरता लिएका छन् । सांसद तथा चौधरी फाउन्डेशनका अध्यक्ष विनोद चौधरीको अग्रसरतामा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाका बनेको छ ।
चौधरीसहित जिल्लाबाट निर्वाचित ३ वटै सरकारका जनप्रतिनिधिको संयुक्त प्रयासबाट नवलपुरलाई नमुनाका रुपमा विकास गर्न भन्दै बनाइएको खाका सार्वजनिक गरिएको हो ।
शुक्रबार शास्वतधाममा एक कार्यक्रम गरी नवलपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसद, प्रदेशसभा सदस्यहरु र ८ वटै पालिकाका प्रमुखले नमुना विकास योजना परिकल्पना दस्तावेज सार्वजनिक गरे ।
नवलपुरबाट तीनवटै निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधिको संयुक्त दस्तावेजमा समावेश गरिएका विकास निमार्णका योजना कार्यान्वयन गर्न सके नवलपुर आउँदो ५ वर्षमै विकास र समृद्धिमा मोडल बन्ने दाबी गरिएको छ ।
खाकामा नवलपुरमा आगामी २० वर्षमा गर्न सकिने विकास, निर्माण र प्रवर्द्धनका विषय समेटिएको छ । जसअन्तर्गत जिल्लाभित्र आगामी १ वर्ष, ५ वर्ष र २० वर्ष्भित्र गर्न सकिने योजना छन् । खाका ९ महिना लगाएर चौधरी फाउन्डेशन, जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरले तयार गरेका हुन् ।
दस्तावेजमा कृषि, पर्यटन, उत्पादन, औद्योगिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, र प्रविधिका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरु बाँडफाँड गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मोडल नवलपुरका परिकल्पनाकार एवं सांसद चौधरीले देशकै नमुना जिल्ला बनाउनका लागि योजनासहितको प्रारम्भिक खुड्किलो सुरुआत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले यो दस्तावेज सबैको संयुक्त पुँजी भएकाले ३ तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था र सरोकारवालाले जिम्मा लिएर अघि बढे नवलपुर साँच्चै मोडेल जिल्लाका रुपमा चित्रित हुने आशा व्यक्त गरे ।
सांसद डा शशांक कोइरालाले आफूले मोडल नवलपुर बनाउन कुनै कसूर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए । यस्तै, सांसद तिलक महतले शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको मोडल नवलपुरको खाकाको सबै सरकारले स्वामित्व लिएर काम गर्न पर्ने बताए ।